FSH fandalinana - inona io?
Ny fitsirihana ny hormone ho an'ny hormones dia nomena mba hahafahana mamantatra ny fiovan'ny kely indrindra ao amin'ny vatana. Ny karazana fianarana toy izany dia ny fandalinana ny FSH. Inona io hormonina io ary inona no mety hitranga aminy?
Ny fitsirihana ny ra ho an'ny FSH (hormonina mihetsiketsika manara-maso) dia nomena, matetika miaraka amin'ny LH (humeinizing hormone). Natao izany mba hahitana sary feno momba ny fahasalamana amin'ny ankapobeny sy ny firaisana ara-nofo indrindra indrindra. Ny fikarakarana FSH sy LH dia heverina ho ara-dalàna raha ny salan'isa eo anelanelan'ny 1.5 sy 2% amin'ny fahasamihafana.
Inona no asehon'ny fanadihadiana FSH?
Ny fivilian-tsasatra madinika indrindra amin'ny fitsipika raha mandalo fanadihadiana momba ny hormone FSH dia manondro momba ny fanitsakitsahana samihafa amin'ny vatan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Amin'io fitomboana io, ny dokotera dia manan-jo hanao ny iray amin'ireto diagnostika manaraka ireto:
Fampidiran-dra avy amin'ny rétm.
Mitsahatra amin'ny fananahana.
Azo atao ny miahiahy miaraka amin'ny fihenan'ny toekarena:
Mifandray amin'ny fitarihana.
Fikirana amin'ny serivisy.
Amenorrhea dia ny tsy fisian'ny fotoana fadimbolana.
Ny fitsipika ao amin'ny vehivavy sy ny fandikana amin'ny ankapobeny ny fitsapam-pitsaboana FSH
Mba hamaritana ny fitsipika dia ireto hormonina manaraka ireto dia nalaina tao amin'ny indices: FSH, LH, progesterone, prolactine ary ny sisa.
Ny prolaktine dia hormone izay hita ao amin'ny vatan'ny lehilahy iray sy ny vehivavy, fa satria heverina ho lehilahy, tokony ho kely kokoa ho an'ny vehivavy, ary ho an'ny lehilahy bebe kokoa. Amin'ny ankapobeny dia tokony hanana 0.2-1,0 ng / ml ny vehivavy. Raha mihoatra, ny vehivavy bevohoka dia mety ho voan'ny fery.
Ny FSG no tompon'andraikitra amin'ny oviana. Amin'ny tranga ara-dalàna - 4-150 / l - ny heverina ho ara-dalàna ny firaisana ara-nofo manontolo. Miaraka amin'ny fihenan'ny FSH amin'ny vehivavy, misy antony roa voajanahary:
Ny fidirana ny fanafody hormonaly.
Amin'ny toe-javatra hafa, ny fialan'ny FSH amin'ny fitsipika dia tokony ho raisina ho mariky ny aretina.
5-NOC amin'ny cystitis
Red borosy misy endometriozy
Endometriose du intestine - soritr'aretina
Miala amin'ny vehivavy amin'ny zanak'olombelona ve ny cystitis?
Ahoana raha tsy mifarana ny isam-bolana?
Na azo atao ny manome sakafo okroshku mama?
Vaksina amin'ny diphtheria
Fitetezam-paritra ara-tsimok'aretina ririnina - mahazatra sy mahazaka ny fotoana rehetra
Mofomamy avy amin'ny yoghurt
Fihetseham-panafody - soritr'aretina
Manicure amin'ny voninkazo vita amin'ny voninkazo
Decoupage ny plastika vita amin'ny seramika - kilasy maoderina
Metastases amin'ny taolana
Sary an'i Kansas ho an'ny trano anatiny
Marinade ho an'ny henan'omby
Maranta - fikarakarana